Maxaa taban ama togan oo ku jira kororka ku yimid qorida buugaagta? | HimiloNetwork
Maxaa taban ama togan oo ku jira kororka ku yimid qorida buugaagta?
Posted by: Himilo in Faallooyinka, Wararka September 1, 2018	0 922 Views
Muqdisho (Himilonetwork) – Qoraalku waa fariinta muujisa jiridda umad dhaxal leh, waxa uu naga reebaa raad, geesta kale waxa uu nagu soo simaa keydka wixii dhacay qarniyo badan kahor dagaal, abaaro iyo barwaaqaba, sababta oo ah qoraa kasta waxa uu wax ka tilmaamaa waxa jira xilligiisa.
Dhacdooyin iyo sheekooyin badan oo horay u soo maray bulshadeena, waxay in badan oo kamid ah nagu soo gaareen qoraal ay sameeyeen qalin-maalkeenii hore oo gartay muhiimadda ah in qoraal wax lagu keydsado.
Qorayaasha ayaa lagu tilmaamaa inay kamid yihiin haldoorrada bulshada maadaama jiilka dambe ay u dhigaan dhaxal qoran, kaas oo noqda hanti qaran ama mid si gaar ah u anfaca bulsho.
Qoraaga wanaagsan waa midka dadka aqrista u sawira xaqiiq barax la’ dhanna aan u janjeerin; akhristahana ka dhiga qof filim ahaan u daawanaya dhacdada qoraalkiisu yahay mid isku xirxiran oo sadarba sadarka kale kuu dhiibayo adiga oo xiiseynaya.
Qiimaha qoraalku qowmiyad ugu fadhiyo Soomaalidu waxa ay kusoo koobtay murtida tiraahda ‘Wixii qoran baa quruuma haree, maxuu hadal qeemo leyahay?!’ Waxaa jira caqabado hortaagan dhalinyarada Soomaaliyeed ee dadaalka weyn ugu jira si ay usoo saaraan buugaag dhaxal u noqda jiilka dambe.
Si ay dhalinyarada qalin maalka ah u ogaadaan waxyaabaha laga yaabo inaysan u saxneyn, waxaa muhiim ah inay la xiriiraan kuwii iyaga kaga horreeyey qoridda buugta ama af-yaqaanada.
Haddii ay sidaa sameeyaan dhalintu, waxaan heli doonaa qorayaal magac iyo maamuus bulshada ku dhex leh, waxay qoraanaa ay noqonayaan raandhiis dhigaal gali kara.
Ma ahan inaan durayo dhalinta Soomaaliyeed ee kasoo weecday waxyaabihii xumaa ee markii hore looga faa’iideysan jiray sida; dagaalladii wajiyada badnaa ee nala soo gu’ tirsaday iyo dib-u-dhacyadii kale.
Waa wax lagu faano ama lagu farxo inaan aragno dhalin badan oo ku tartameysa qorida buugaag-ta iyo dhaxal reebka dadkooda.
Da’yartu waxay mudan yihiin in lagu dhiirri-geliyo laguna taageero hammigooda iyo tiigsigooda, laguna kaabo talooyina ku habboon hawsha ay ku dhaqaaqeen.
Qoraalkan kooban waa farriin iga timid oo aan ku bogaadinayo in buug qoridda noo curatay aan laga dhigin bilow maalmo ku eg balse loo arko tallaabo aan ku tiigsan karno tagaado horey nooga tallaabo qaaday.
Qore: Cali Hilowle.
Kala xiriir: calikaafi9@gmail.com
Previous: La kulan – Haweeneyda Maalinle u Quudisa Boqollaal Danyar ah.
Next: Daawo – Milyaneer Qashinka ka ururiya Jidadka!
Markay Dadku Dhibanaha ku soocaan Dhibkiisa
Bisha Ramadaan oo Isniinta ku beegan.
Gufaacada Dalalka UAE, KSA iyo Bahrain ee ku Jihaysan dalka Qadar.